I-China pp lukathayela wezihlahla onogada Umkhiqizi kanye Umthengisi | Sihai
Kk ishidi elingenalutho yi-polypropylene (PP) njengempahla eyinhloko eluhlaza ngemuva kokushintshwa kwephepha lepulasitiki, ngenxa yokuphinda kusetshenziswe izinto zokusetshenziswa nokukhiqiza, ukukhishwa okungu-zero kwenqubo yokukhiqiza kuyenza ibe yinto entsha yokuvikela imvelo eye yaziwa emhlabeni wonke, futhi ingasetshenziswa njengebhodi lezinkuni, amakhadibhodi nensimbi yensimbi emikhakheni eminingi Ukufaka izinto zokwakha.
Unogada wesihlahla sikathayela wenziwe ngephepha likathayela, lingumvikeli wesihlahla sesithombo, isitshalo esincane. Esigabeni sokuqala sokutshala izithombo, amandla okumelana namakhaza nomoya awalungile, futhi kulula ukudliwa yizilwane. Ngakho-ke, izindlela zokuvikela ngokuvamile ziyadingeka ukuqinisekisa ukukhula okunempilo kwezithombo. Kk ukuvikelwa kosawoti bebhola elingenalutho kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo, ukwakheka kwesakhiwo okunengqondo, ukuzinza okuhle, ukumelana nomoya onamandla, umphumela omuhle wokuvikela, akulula ukulimaza emanzini, wandisa kakhulu impilo yenkonzo, ugweme ngempumelelo izilwane ezigaya insipho, kulula ukugqugquzela nokusebenzisa.
Langaphambilini pp elingenalutho sheet kasilika osebenzisa ungqimba pad